Chainalysis - को गुमनाम Bitcoin नष्ट कि कम्पनी - Blockchain समाचार
Chainalysis – को गुमनाम Bitcoin नष्ट कि कम्पनी
सबै भन्दा विकसित देशहरूमा, सक्रिय काम cryptocurrencies र रोकावट को विनियमन लागि नियम परिचय रहेको छ. बिल को मस्यौदा मा, तिनीहरूले अक्सर घेरा नेटवर्क निगरानी गर्न कम्पनीहरु द्वारा सहायता छन्, सबै भन्दा प्रसिद्ध को एक – Chainalysis. मा मात्र 2017 कम्पनी बारे कमाएका $ 700,000, राज्य र कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट मिलेर.
Chainalysis मा स्थापित भएको थियो 2014 Jano Moller द्वारा, जोनाथन Levin र माइकल Gronager. को मुख्य निर्देशन कम्पनी पैसा शोधन र ठगी मुकाबला लागि blockages र cryptocurrency लेनदेन अनुगमन गरिएको छ. कि यस्तै सेवाहरू प्रदान कम्पनीहरु धेरै छन्, तर लगभग सबै अमेरिकी विभाग, यस्तो Europol रूपमा साथै युरोपेली संगठनहरूको, Chainalysis लागू.
गत वर्ष Chainalysis भन्दा बढी प्राप्त $ 700,000 मातृभूमि सुरक्षा को अमेरिकी विभाग देखि (DHS), अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) अमेरिकी आप्रवासन र भन्सार नियन्त्रण सेवा र (ICE) यसको लागि. पनि गत वर्ष, कम्पनी नियमित निजी संगठनहरूले सम्पर्क थियो, धेरै सम्पर्क र साझेदारी सम्झौताहरूमा इशारा त्रैमासिक प्रतिवेदन द्वारा प्रमाणित.
र Chainalysis को नियमित ग्राहकहरु एक अनुसन्धानसम्बन्धी अमेरिकी संघीय ब्यूरो थियो (एफबीआई), जो बारम्बार पछिल्लो केहि वर्ष को कम्पनीको खाता replenished छ.
अनुसन्धानहरूले मा सहायता
Chainalysis संग सहयोग को लागि धन्यवाद, को एफबीआई को अज्ञात व्यापार साइट सिल्क रोड को सहभागीहरू को कार्यहरू अनुसन्धान मा महत्वपूर्ण परिणाम हासिल गर्न व्यवस्थित, साथै पर्वत Gox विनिमय को दिवालियापन को विवरण सिक्न रूपमा. जे भएपनि, को Chainalysis कर्मचारीहरु बेपत्ता ट्र्याक 650,000 bitcoins, जो कांग्रेस मा सुनुवाइ समयमा ज्ञात भयो.
साथै, को अनुगमन कम्पनी को काम धन्यवाद, लेट नोभेम्बर मा 2017, अमेरिकी संघीय अदालत गर्न गोप्य डाटा प्रदान गर्न कोइनबेस विनिमय आदेश 14,000 प्रयोगकर्ता. यस्तो निर्णय अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा गरेर छानबिन ज्योति मा गरिएको थियो (आईआरएस), जो विनिमय को प्रयोगकर्ता cryptocurrency को बिक्री देखि आय प्राप्त गर्ने आशङ्का, प्रायजसो, तिर्ने कर टाढा जाने. त्यसैले, लागि आईआरएस डाटा अनुसार 2015, Bitcoin संग संचालन देखि लाभ मा कर द्वारा मात्र भुक्तानी थियो 802 मान्छे.
गुप्तलेखन मा प्रभाव
कम्पनी वेबसाइटमा Chainalysis cryptocurrency र अवरुद्ध प्रविधि विश्वास भन्छन्, र कम्पनीको लक्ष्य वित्त को क्षेत्र मा शङ्कास्पद गतिविधिहरु रोक्न उपकरण संग संगठन प्रदान गर्न छ, जबकि गोपनीयता अधिकार आदर. तथापि, वास्तबमा, यस कम्पनीको blockanalysis सेवाहरू नेटवर्कमा विशिष्ट लेनदेन संग विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जडान.
त्यसैले, Chainalysis को सेवाहरूमा धन्यवाद, को आईआरएस, उदाहरणका लागि, bitcoins र अन्य cryptocurrencies को धारकों को कार्यहरू निगरानी र कर को भुक्तानी निगरानी. र यो कि cryptocurrencies संग लेनदेन अर्थ, यस्तो Bitcoin रूपमा, छैन अज्ञात छलफल गर्न सकिन्छ. पनि, कि Chainalysis सेवाहरू प्रयोग कम्पनीहरु ब्लक कारोबार मा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त, आफ्नो संभावित ग्राहकहरु र साझेदार.
कम्पनी Chainalysis राज्य प्रतिनिधिहरु र संरचना बीचबाट थप र अधिक ग्राहकहरु प्राप्त छ भन्ने तथ्यलाई, राज्य विनियमन बिना cryptocurrency भविष्य विश्वास गर्ने गुप्त समुदाय को धेरै सदस्य र गुमनाम गर्न सबैको सही चिन्ता. तथापि, को कुटिया पूंजी निधि बिल Browder को टाउको अनुसार, कारण यस्तो Chainalysis रूपमा कम्पनीहरु को कार्यहरू गर्न, cryptocurrencies लगानीकर्ताले लागि लगानी को एक झन् आकर्षक र विश्वसनीय तरिका हुँदै गइरहेका छन्.
आदेश पृ संख्या को मामला मा एक कसरी cryptocurrency को दर को व्यवहार भविष्यवाणी गर्छ ...
प्रकृति ओ के हो ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 26 जनवरी 2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 27 जनवरी 2018